दसैँमा के खाने, के नखाने ? स्वस्थ्य मासु कसरी छान्ने ?
मासु हलुका गुलाबी, हरियो तथा प्याजी रङको भएमा त्यो खान अयोग्य भइसकेको हुन्छ । मासुबाट कुनै पनि किसिमको अमिलो, बिग्रिएको, अन्य बेलाको मासुकोभन्दा फरक किसिमको गन्ध आएको भए त्यो पनि अयोग्य हुन्छ ।
मासु फ्रिजमा अलग–अलग गरी छोपेर सफा र चालू फ्रिजमा राखेको हुनु पर्छ । मासु काट्दा र समात्दा तन्किनु हुँदैन । मासु किन्ने पसल, मासु काट्ने मानिस, काटेको स्थान, अचानो, चलाएको हतियार, लगाएको पोशाक, काटेको तरिका सफा भए नभएको हेर्नु पर्छ ।
चाडबाडमा खानपानले बढी महत्व पाउने गर्छ। दसैँमा मासु, मदिरा र मिठाईको अत्यधिक प्रयोग गरिन्छ।तर, यसले हृदयघात, मस्तिष्कघातजस्ता रोगको सम्भावना बढाउने छ ।
विशेषगरी मासुजन्य खानेकुरा, चिल्लो, गुलियो, नुनिलो, तारेका खानेकुरा, जंकफुड आदिको अत्यधिक प्रयोग स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले लाभदायी मानिँदैन।बढी चिल्लो र कोलेस्ट्रोलयुक्त खानेकुराले रक्तचाप, हृदयघात, मस्तिष्कघात र मुटुसम्बन्धी समस्या निम्त्याउँछ।त्यस्तै पेटसम्बन्धी समस्या, फुड पोइजन, अल्सर, युरिक एसिड, मोटोपनजस्ता रोग लाग्ने सम्भावना अधिक हुन्छ।
त्यसैले चाडबाडमा रमाइलोसँगै हामीले खानपानमा पनि ध्यान दिनुपर्छ।त्यसैले रातो मासु कम खाने, तारेको खानेकुरा नखाने, प्याकेट वा बोतलका जुस प्रयोग नगर्ने, चिनी घिउ र क्रिमको प्रयोग कम गर्ने र फलफूल र सागसब्जी धेरै खाने गर्नुपर्छ।